Muktaar Jamaal: Gaazexeessaan VOA Adaamaatti dargaggootaan rukutame, saamame | Kichuu
Posted on October 25, 2019 by kichuu_admin
(bbc)–Gaazexessaan miidiyaa Ameerikaa VoA’f gabaasu guyyaa har’aa ganama magaalaa Adaamaatti dargaggoonni haleellaa akka irratti raawwatan ibse.
Gaazexeessaa Raadiyoo VOA Afaan Oromoo/Sagalee Ameerikaa kan ta’e Muktar Jemal ganama kana Adaamaatti otoo hojiirra jiru humnoota magaalaa keessa socho’aniin reebamee jira. Miidhaa irra gaheen ammaan tana Hospitaala Jeneraal Adaamaa geeffamee wal’aanamaa jira.
Dubbiin ammaan kana Godina Shawaa Bahaa keessatti adeema jiru kan badee sammuu bulchiinsa godina kana irraa jalqabeeti. Namni kun nama jibbaa uummata Oromoo keessatti guddatee, maqaa OPDOn uummata keenya fixaaf ficisiisa as ga’edha. Gaafa inni bakka kanatti muudamuu maaliif akka harcaatu nafxanyaa uummanni Iluu A/Booraa offirraa ari’ee nama jijjirama jechuun akka fidan saaxiluu yaaleen turee. Garuu kan gurra nuuf kenne hin jiruu. Guyyaa namni kun muudamee jalqabee dubbiin Godina kanaa badaa dhufee. Geetachoo Tamiraat Abbebee jedhamaa. Ilma nafxanyaa abbaan isaa uummata keenya dararaa ture, inni immoo maqaa OPDOn nutti darbee nu fixaaf ficisiisa ture. Ammas hanga namni kun bakka kana jirutti uummanni Godina kanaa nagaa hin argatuu
Via: Dereje Atomsa
Odeessa- Kaaba Shaggar Darraan Kan Amaaraadha jechuun ..